Huteelada America Hop On CBD Hype • Dawooyinka Inc.eu
Hudheelada Ameerika waxay rajeynayaan in CBD hype
Si aad u sii joogtid wadanka Mareykanka, xitaa nasasho nasasho, hudheelo ayaa la dejiyaa cannabidiol. Waad ku mahadsan tahay saameynta la dejiyey iyo saameynta anti-bararka CBD caan ah oo caan ah. Waxaad ka arki kartaa qofka ka soo jeeda dhirta cannabis ee alaabooyinka kala duwan, laga bilaabo kareemka jirka ilaa qaxwaha. Taasi waa sababta aad u aragto isbeddel cusub oo soo baxaya, hoteelada iyo isboortiga ayaa sidoo kale ka faa'iideysanaya guulaha CBD.
1 Xaaladda sharciga ee CBD
2 Balms iyo saliidaha la mariyo
4 CBD cocktails iyo qaxwaha kafeega
Daraasadaha qaarkood ee ka socda jaamacadaha iyo shirkadaha ku takhasusay daawada waxay si taxaddar leh u muujinayaan in CBD - oo ah qaybta aan nafsiga ahayn ee xashiishadda - ay yareyn karto dhowr dhibaatooyin caafimaad. Maamulka Cuntada iyo Maandooriyaha (FDA) ayaa ansixiyay daroogada laga soosaaray CBD sanadkii hore.
Xaaladda sharciga ee CBD
Si kastaba ha noqotee, xaaladda sharciga ah ee CBD weli ma cadda. Tilmaamaha Federaalka waxaa loo adeegsan karaa siyaabo kala duwan waxayna kala duwan yihiin Dawlad Gobol iyo mararka qaarkood xittaa magaalada ilaa magaalada. Tani waxay inta badan ku xiran tahay sida CBD loo soo saaro, halka uu macaamilka iibsado iyo sida loo isticmaalo. In kasta oo baaritaan dheeraad ah loo baahan yahay si loo qiimeeyo kartida CBD, hudheelo badan oo American ah ayaa ka faa'iideysanaya isbeddelka CBD. Hoos waxaad ka heli doontaa badeecadaha CBD ee jecel 3 oo aad la kulmi karto intaad ku sugantahay meesha aad kudartahay fasaxa aad jeceshahay.
Balms iyo saliidaha la mariyo
Spas waxay ku darsadeen alaabada CBD sida saliidaha iyo looshinta daaweynta. Tani waxay ku saleysan tahay caddeyn sheeko xeel dheer oo muujineysa in CBD ay leedahay saameyn diirimaad oo yareyneysa kala-goysyada adag iyo murqaha muruqyada. Ritz-Carlton, Amelia Island, Florida, martidu waxay ballansan karaan duugista "CBD & Recovery" iyagoo isticmaalaya shan diyaaradood oo hemp ah. Hoteelka Logan ee ku yaal Philadelphia, martida waxaa lagu daaweeyaa saliidaha duugista ah ee CBD iyo xoqida kuwaas oo kor u qaada mani-pedi, manicure iyo pedicure. Taageerayaasha Hydrotherapy waxay ku raaxaystaan ​​qubeyska saliidda CBD ee Elms Hotel & Spa oo ku taal magaalada 'Excelsior Spring spa' ee magaalada Missouri.
Kadibna wax badan ayaa jira edibles: cuntooyinka iyo waxyaabaha nafaqada leh ee ay ku jirto CBD. Tusaale ahaan, milkiileyaal hudheello caan ah oo ka socda 'The Standard' waxay la midoobeen Lord Jones si ay u suuqgeeyaan nacnacdooda gaarka ah ee CBD. Nacnaca liinta ayaa midkiiba ku jira 20 miligram oo CBD ah. Kuwani mararka qaarkood waxaa laga heli karaa baararka yar yar ee xeebta Miami. Meel kale oo ku taal xeebta galbeed, Derek Simcik, oo ah kuugga fulinta ee Thompson Seattle, wuxuu leeyahay dad iska soo aruursada halkaas oo uu shuraako kula yeesho bakhaarada haramaha maxaliga ah iyo THC iyo CBD ee suxuunta.
CBD cocktails iyo qaxwaha kafeega
CBD sidoo kale waxay ku sii kordheysaa liiska baararka. Gaar ahaan meelaha loo dalxiis tago ee isticmaalka madadaalada xashiishku uu sharci yahay. Portland, 'Jupiter Next' cusub wuxuu u adeegaa khamriga CBD oo leh koob walba oo kafee ah. Hoteelka Denver ee Teatro, Cadaan Ruush ah - is biirsaday leh vodka, khamriga cabitaanka iyo kareemka iyo barafka - waxaa loogu adeegaa basbaas lagu daray CBD iyo saliid cows ah. Xilliga firaaqada ee ku yaal Colorado waxaad ku dhameyneysaa daaweynta fayoobaanta inaad ku nasato shaaha CBD. Miyay sida ugu dhakhsaha badan sidan ku noqon doontaa meelo badan oo adduunka ah?
Akhri wax dheeraad ah travelandleisure.com (Source, EN)
AmericaCBDsaliid cbdcaafimaad lehcaafimaadka
Nederland (xayeysiin) - Zamnesia waa mid kamid ah hogaamiyaasha casriga ee khadka tooska ah aduunka with